samedi, 11 mars 2017 20:41
Fenoarivo Atsinanana: Fankalazana ny andron'ny vehivavy
Notontosaina androany Asabotsy 11 marsa ny Fankalazana ny Fetin'ny Vehivavy Manerantany taty amin'ny Distrikan'ny Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjorofo raha tsy tontosa tamin'ny 08 mars lasa teo noho ny RIVODOZA izay nandalo taty Fenoarivo Antsinanana.
Anisan'ireo nanamarika izany sy hita nisongadina tamin’ny halavan'ny laharana ny Fikambanam-behivavy TGV ao amin'ny district Fénérive-Est, tarihin'i Présidente Départemental TGV Fénérive-Est ramatoa Angelica.
samedi, 11 mars 2017 20:28
Alaotra Mangoro : Namono olona 4, namela traboina 2 000 ny rivodoza ENAWO
Nitondra izay voatsirambin’ny tanana ho fanampiana ireo traboina sy nampahery ireo fianakaviana namoy havana ny lehiben’ny Faritra Alaotra Mangoro Ranarisoa Désiré.
Nitondra ireo karazam-panafody entina hitsaboana ireo traboina izay mety tratry ny aretina ihany koa ry zareo avy amin’ny sampandraharahan’ny fahasalamana.
Navesatra tokoa ny fahavoazana taty amin'ny faritra Alaotra Mangoro, akoatr'ireo tanimbary dobon-drano dia nisy 4 ny namoy ny ainy ary maherin'ny 2 000 ireo tsy manankihalofana traboina.
samedi, 11 mars 2017 14:23
Mahajanga : Nanolotra fanampiana ireo vehivavy voafonja ao Marofoto ny Club de supporteurs Andry Rajoelina
Tsy nanadino ireo vehivavy miisa 45 ao amin’ny fonjabe Marofoto ny fikambanana CSANR ( club des supporteurs d’Andry Rajoelina) tarihin'i Rakotomamonjy Julianah eto Mahajanga tamin’ny fankalazana ny andron'ny vehivavy 8 marsa fa dia tonga nanolotra fanampiana ireo vehivavy voafonja.
Vary, menaka, vatomamy sy bisiky, paty, sira vovony no natolotr'izy ireo tamin'izany.
samedi, 11 mars 2017 14:11
Association Fitia: Mitsinjo hatrany ireo sahirana
"Ny Soa atao levenam-bola", izany ny teny faneva entin'ny fikambanana Fitia manatanteraka ny asa ataony isan'andro.
Toy ny tanjona eo amin'ny fikambana, dia avy hatrany dia nandray andraikitra ireo mpikambana marobe tarihan'i Mialy Rajoelina, nifanome tanana hitondra fanampiana ho an'ireo sahirana sy traboina vokatry ny rivodoza ENAWO.
Ka tetsy amin'ny toby Akorondrano, no niarahan'izy ireo nifarimbona hanomezana sakafo mafana ho an'ireo olona 1000 mahery izay tsy manan-trano vokatry ny tondra-drano misy eny amin'izy ireo.
Ka na alina aza ny andro, dia omaly alin'ny Zoma dia nanao tanamaro izy ireo ho mariky ny Fitiavana entin'izy ireo ho an'i Mpiara-belona.
samedi, 11 mars 2017 14:04
ENAWO: Bilan provisoire très lourd
38 morts, 118 sites d’hébergement, 8 disparus, 180 blessés, 116 191 sinistrés, 53 172 déplacés depuis l'impact de ENAWO.
Plusieurs maisons détruites, plusieurs hectares de rizières inondées.
samedi, 11 mars 2017 13:46
Taom-baovao Malagasy : Ho tontosaina ny 28 martsa ho avy izao
Toy ny fanao isan-taona, ny alahady 26 martsa 2017, manomboka amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro dia hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, ho fangataham-pitahiana ho an’ny Tanindrazana, hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambohidrabiby.
Ny talata 28 martsa maraina dia manao ny FAFY RANO arahina tso-drano am-bava ataon’ny Raiamandreny. Rehefa izany dia manao TATAO vary amin-dronono tondrahan-tantely hisantarana ny taona vaovao sy hifampirariana soa.
samedi, 11 mars 2017 13:04
Fianarantsoa : Mpiofana ara-politika andiany faha-efatra
Fomba iray itaizana ara-politika an'ireo manam-paniriana hanova zavatra aty Fianarantsoa ny fanofanana tahaka izao. 8 volana no faharetany ary 25 isaky ny andiany no raisina.
Ny antoko Fitambolagnela I.A.D no angady nananana izany ivontoerana antsoina hoe FORMAPOL eto Fianarantsoa izany. 23 no isan'ny taranja anovozam-pahalalana. Tanora sy mpandraharaha, mpandinika ara-politika sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny no mpiofana.
samedi, 11 mars 2017 12:44
Lohatranambo-Farafangana : Polisy kaominaly nametaveta zazavavy vao 12 taona
Lehilahy iray, polisy kaominaly tratra nametaveta zazavavy vao 12 taona tao Lohatranambo, Kaominina Ambohigogo Distrikan'i Farafangana, ny alin'ny talata 7 marsa teo.
Simba tanteraka ilay zaza ary tsy maintsy nozairina. Nosamborin'ny Fokonolona ilay raim-pianakaviana nahavanon-doza ary nofatorana. Natolotra ny Kaominina izy mandra-pahatongan'ny mpitandro filaminana.
Tsy mbola nametraka fitoriana ny ray aman-drenin'ilay zaza fa mbola sahirana mitsabo ilay zaza, izay tsy maintsy nalefa amin'ny hopitalibe Farafangana.